Khokhelwa ukubhala | Umshicileli wezindaba ezimfishane
Thola imali ngokwakha okuqukethwe okuyingqayizivele kwamapulatifomu okusakaza. Bhala izindatshana bese uthola imali ngombono ngamunye. Sebenzisa ipulatifomu yethu ukuthumela izindatshana nezindaba ezivela empilweni yakho yansuku zonke. Silinde ababhali bamakhophi futhi sikhokhele okuqukethwe!
Kuyisiteji sokusakaza lapho abasebenzisi babelana ngama-athikili amahle, izithombe namavidiyo, baqala ukusakaza, bahlangane nabangane futhi baxoxe. Sifuna ababhali abanekhono abakulungele ukudala okuqukethwe kwabo okuhlukile.
Sikhokhela ukubuka ngakunye kokushicilelwa kwakho futhi sivumela okuthunyelwe okukhokhelwa abasebenzisi. Ungakhuphukela ku- $ 0.04 ngokubuka.
Yenza imali ngokubhala online
Sebenzisa wonke amandla epulatifomu ukwenza imali. Yonke imigwaqo yokwenza imali ivulelekile kuwe: thumela izindatshana zamahhala futhi uzuze ngokubukwa noma wenze okuqukethwe kwakho kukhokhelwe abasebenzisi. Ungathola futhi imali engenayo ngokulandela uhlelo lwethu lokuhambisana
Inkokhelo yokubuka okuthunyelwe. Sikhokhela yonke imibono engu-50 yokuqukethwe mahhala kubasebenzisi.
Ukuhambisa indaba emfushane
Umklomelo wokumema ababhali bamakhophi. Mema abanye ababhali enkundleni yethu bese uthole umvuzo ongu-10% emholweni wabo.
Ukwenza imali ngombhalo ngokubhaliselwe. Dala okuqukethwe okukhethekile futhi ukwenze kutholakale ngokubhaliselwe. Setha intengo yokubhaliselwe kwanyanga zonke.
Ungazithumela kuphi izindaba ezimfushane ngemali
Ukwenza imali ngokusebenzisa ithrafikhi yenjini yokusesha. Joyina uhlelo lokuhambisana, mema abasebenzisi kuwebhusayithi futhi uthole ama-30% ekuthengeni kwabo endaweni yesikhulumi.
Ukubhala izindaba ezimfushane
Okuqukethwe okuhlukahlukene kwamukelekile. Manje sithuthukisa ngenkuthalo okuthunyelwe mayelana namahlaya, ezemidlalo, imidlalo yamakhompyutha, ama-esports, i-cospay ne-anime, amantombazane, ukupheka, izithombe kanye namahlaya.
Umshicileli wezindaba ezimfishane
Izikhala ezisezingeni eliphakeme zikusiza ukuthi uthole okuningi. Isithombe noma ividiyo ehehayo futhi echazayo, eningiliziwe iheha ukubukwa okuningi futhi yenyuse imali engenayo yombhali
Kulula ukukhipha imali. Isamba esincane sokuhoxa ngu- $ 10. Donsela imali ku-Visa noma i-Mastercard, i-PayPal, i-Yoomoney, i-QIWI wallet, i-akhawunti yeSepa noma i-Bitsafe noma wenze i-invoyisi (inkokhelo yokukhokha).
Cabanga ukuthi kuyinto enhle kakhulu?
Sihlole manje bese ukhokhelwa ukubhala namhlanje!